KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay magaalada Garbahaarey
Sunday 15 April 2012 13:29
Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay magaalada Garbahaarey
Kismaayo (Keydmedia) - War deg deg ah goordhow naga soo gaaray magaalada Garbahaarey ee xarunta gobbolka Gedo ayaa sheegaya in qarax xooggan oo ka dhacay gudaha magaalada, ayadoona qaraxaasi uu sababay khasaaro aad u farabadan.
Qaraxaan oo ahaa Miinada dhulka laga hago ayaa waxaa uu ka dhacay goob Maqaaxi ah oo ku taalo bartamaha magaalada Garbahaarey.
Inkastoo wararku ay iska soo daba dhacayaan ayaa haddana wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha qaraxa waxaa ay sheegayaan in ilaa 5 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa goordhow ka dhacay magaalada Garbahaarey.
Sida ay dad goobjoogayaal ah Keydmedia u xaqiijiyee qaraxaan ayaa la doonayay in lagu khaarijiyo sargaal ka tiorsan dowladda TFG kaasoo markaasi ka shaahaayay maqaayada la qarxiyay.
Dadka qaraxa ku dhintay iyo kuwa ku geeriyoodayay warar kala duwan ayaa ka soo baxaayo waxa ay isugu jiraa hasayeeshee wararka ugu badan aay soo gaaraaya warqabadka Keydmedia ee Kismaayo waxaa ay sheegayaan in dadka dhintay ay shacab u badanyihiin.
Warbaahinta Keydmedia ayaa hadda ku howlan Faah-Fahin. - Filo dhawaan Warkaan oo faah faahsan.